ကိုယ်၀န်ဆောင်အပ်ခြင်းနှင့်မွေးဖွားပြီးနောက်စောင့်ရှောက်ခြင်း - intouchmedicare
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပ်ခြင်း (Antenatal Care)
ကိုယ်၀န်ဆောင်အပ်ခြင်းသည် ကိုယ်၀န်ရှိတဲ့အချိန်မှစပြီးမွေးတဲ့အထိကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ကိုယ်၀န်ဆောင်သောအမျိုးသမီးများသည် ဆရာ၀န်ဆီကိုပြပြီးချက်ချင်းဗိုက်အပ်သင့်ပါသည်၊နောက်ပြီးဆရာ၀န်ချိန်းရက်အရလာပြီးကိုယ်၀န်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါသသည်။၎င်းမှာ သားအိမ်တွင်းပိုင်းစစ်ဆေးခြင်း၊သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အန်ထာဆောင်းရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ မိခင်နှင့်သန္ငေသား၏ကျန်းမာကောင်းမွန်စေဖို့ရန်အတွက် ကိုယ်၀န်ဆောင်စဉ်၌ ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်များသည် ဆရာ၀န်ညွန်ကြားပေးအရလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်
အင်ထ‌‌ပ်မီဒယ်ခဲ (Intouch Medicare) ဆေးခန်း၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပ်ခြင်း‌သည်မည်သို့ကောင်းသနည်း ?
ကိုယ်၀န်ဆောင်အပ်ခြင်းသည် မိခင်ရောကလေးပါအန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းကျန်းမာမာရှိနေဖို့ရန်အတွက်သည် ၁၂မတိုင်ခင်ကိုယ်၀န်ဆောင်အပ်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်၊၎င်းသည်အောက်ပါအတိုင်းကောင်းကျိုးများကိုဖော်ပြထားပါသည်။
မူမမှန်တဲ့လက္ခဏာကိုလျင်မြန်စွာကုသနိုင်ခြင်း ဉပမာအားဖြင့်ဗိုက်ထဲလေ၀င်ခြင်းနှင့် ပြင်ပသန္ငေသားတည်ခြင်း
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည် ကျန်းမာရေးပိုင်းစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်၊လူနာများထံမှ အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိပါသည်၊၀န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်း အကြောင်းပြချက်များကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးခန်းသည်မွေးဖွားပြီးနောက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရန်၀န်ဆောင်မှုရှိပါသည်၊ ဤတစ်‌နေရာတည်းသာလျှင်အပြီးအစီးအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းရှိပါသည်၊သို့လျှင်သာမက မိမိ၏ကလေးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းနှင့်တကွပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မည်ဟုသေချာစေဖို့ရန်အတွက်လဲဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်၀န်ဆောင်အပ်ရန်စိတ်၀င်စားနေသူများအတွက် ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်၀န်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းညွန်ဖို့လိုနေသောသူများအတွက်တို့သည် အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းထံမှမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ မိမိအတွက်ဆေးခန်းမလာခင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်နှင့် မိခင်ရောကလေးပါအစကနေပြီးမွေးတဲ့အထိအင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းနဲ့အပျော်ရွင်ဆုံးအချိန်ရှိဖို့အတွက် ဆေးခန်းသည်မိမိ၏သံသယရှိနေသောအကြောင်းအရာကိစ္စများအားလုံးကိုဖြေပေးရန်အဖွဲ့များအဆင်သင့်ရှိပါသည်၊၊
* ဤစျေးနှုန်းသည် Facebook နှင့် Line မှတဆင့်ဆက်သွယ်သောသူတွေအတွက်သာလျှင်
အရည်အသွေး ပြည့်ကိုယ်၀န်ဆောင်အပ်ခြင်းဆိုတာက၁၂ပတ်မတိုင်ခင်ဗိုက်အပ်ထား ပြီးကိုယ်၀န် ဆောင်ကာလတစ်လျောက်မှာ မိခင်ရောကလေးပါကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် အနည်းဆုံး၅ ကြိမ်ဖြင့်ဆရာ၀န်ကိုလာပြသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဗိုက် အပ်ထားပါကမိမိကလေးမွေးတဲ့အထိကိုအကျိုးပြုစေပါမည်။
မိခင်နှင့်ကလေး၏ကိုယ်၀န်ဆောင်စဉ်တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သောမူမမှန်မှုအန္တရာယ်များကိုလျော့ချ ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်၊မိခင်၏ကျန်းမာရေးနှင့် ကလေး၏ကြီးထွားမှုများကိုဆရာ၀န်အားဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အယ်ထရာဆောင်းကိုကိုယ်၀န်ဆောင်ကလ 18-24ပတ်အတွင်းမှာရိုက်နိုင်ပါသည်၊ဒါပေမဲ့ ကလေး၏လိင်အတိအကျမြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကလေး၏အနေအထားပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မည်။
ကိုယ်၀န်ကာလရင့်လာပြီး မွေးခါနီးပြီဆိုရင်ဆရာ၀န်သည်မကြာခဏချိန်းဖို့လိုပါသည် ဘာလို့လဲဆိုတော့က‌လေး မွေး ရန်အဆင်သင့်ဖြစ် အောင်လို့၊မိခင်၏ဗိုက်ထဲကလေးကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးပါမည်၊မိခင်များသည်ဗိုက်ထဲကလေးတရက်မှာဘယ်နှစ်ကြိမ် လုပ်လဲဆိုတာကိုတွက်ထားဖို့လိုအပ်ပါမည်။
ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်၏ဖြစ်နိုင်သောအန္တ ရာယ်များနှင့် မိခင်နှင့်ကလေး ၏ကျန်းမာရေး
ကိုယ် ငန်ဆောင်မိခင်များရှိနိုင်သောအန္တရာယ်များသည် ဆီးချို၊ သွေးတိုးနှင့်ကို၀န်အဆိပ် ဖြစ်ခြင်းများရှိကြတတ်သည်၊ အဲ့တာကြောင့် ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်သည်ကိုယ်၀န်ချိန်မှာဆီးချို ကိုစစ်ဖို့လိုအပ်သည်၊အသက်ကြီးတဲ့မိခင်များသည်ဆီးချိုနှင့်ကိုယ်၀န်အဆိပ်များဖြစ်နိုင်ခြေလဲ များလိမ့်မည်၊ကိုယ်၀န်ဆောင်ချိန်၌ရှိသောရောဂါလက္ခဏာများသည်အများအားဖြင့် ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပျောက်သွားလိမ့်မည်။
သာလာဆီးမီးရား‌ဟုခေါ် သောဂါသည်မူမမှန်သော သွေးဉနီမှလဲဖြစ်ပေါ် စေသည်၊၎င်းသည် မျိုးရိုးဖြင့်အဖေအမေများဖြစ်၍ကိုယ်လဲရှိကြတတ်သည်။
စိုးမရိမ်သေးပါနဲ့ဆရာ၀န်သည်ဖြစ်နိုင်နှုန်း နဲ၊များသည်ကိုလဲအသေးစိတ်ထပ်ပြီးစစ်ဆေး ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်၊တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးအသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဖြင့်ကုသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသွေးစစ်ခြင်း HIV နှင့်ဆီဖီလစ် (Syphilis)၊ အသည်း‌ရောင်ရောဂါ (hepatitis B )
ကိုယ်၀န်‌ဆောင်မိခင်များသည်ဆီးချိုကိုကိုယ်၀န်ကာလ24-28ပတ်အတွင်းမှာစစ်‌ဆေးဖို့လိုအပ်သည် ၊ မိခင်သည်သကြားဓါတ်ကို ထိန်းနိုင်သလားစစ်ဆေးရန်သကြား ရည်ကို‌သောက်ခြင်းအားဖြင့် ဆီးချို‌ရောဂါကိုစစ်ရပါသည်၊၊စစ်‌ဆေးနည်းသည် ၂မျိုးရှိပါသည်။
1. ဆီးချိုကိုစိစစ်ရန် သကြားရည် ၅၀ဂရမ်‌သောက်ခြင်းဖြင့်ရေနှင့်အစာကို‌ရှောင်ရန်မလိုပါ။‌ သောက်ပြီးနောက်၁နာရီစောင့်၍ သွေးစစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
2.1 သကြားရည် 100g သောက်ပြီးနောက် ‌သွေးကိုနာရီ1,2,3 မှာစစ်ရပါသည်
2.2 သကြားရည် 75g ‌သောက်ပြီးနောက်သွေးကိုနာရီ 1,2 မှာစစ်ရပါသည်။
သွေးစစ်ဆေးခြင်းသည် ဗိုက်ထဲကက‌လေးကျန်းမာရေးအတွက်စစ်ဆေးရန်အရေးကြီးပါသည်၊ အကယ်၍အဖေသည်သွေးမစစ်ခဲ့ပါကကျန်းမာ‌ရေးမူမှန်မမှန်မှုကိုလဲမသိနိုင်‌ပေပောလို့လဲဆို‌တော့အဖေမှအချို့‌သောရောဂါများသည်အ‌မေမေကူးစက်‌စေနိုင်ပီးက‌လေးအထိကိုသွား‌ရောက်ကူးစက်‌စေစေသည်။ ကာကွယ်နိုင်‌သောရောဂါများမှာ ဆီဖီလစ်၊ဘီပိုး သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဖြင့်ကူးစက်‌သောရောဂါများမှာ သာလာဆီးမီးရား အစရှိသဖြင့် ၊အဲ့တာ‌‌ကြောင့် အဖေရောအမေများသွေးစစ်ဆေးလျှင်ဗိုက်ထဲကကလေးအတွက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်လိမ့်မည်။
ဘာလို့လဲဆို‌တေ့ာတုပ်‌ကွေးသည်သာမန်လူထက်ဗိုက်ကြီးသောမိခင်များမှာပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိပါသည်၊‌နောက်ပြီးအခြားနောက်ဆက်တွဲရောဂါများလဲဖြစ်စေနိုင်ပါသည်၊ဉပမာအားဖြင့်အဆုတ်ဖောင်းကြွခြင်း၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်ခြင်း၊နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြန်ခြင်း၊၎င်း‌ရောဂါများသည်‌သေဆုံးနိုင်သည်အထိဖြစ်စေပါသည်၊အများပိုင်းသည် ဒီကာကွယ်ဆေးကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထိုးသင့်ပြီးကိုယ်၀န်မိခင်မှာ ‌မွေးတဲ့နောက်အမေရေကလေးပါတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်‌ရန်အတွက် ကိုယ်၀န်ကာလ၄လအထက်မှာထိုးသင့်ပါသည်၊အဲ့တာ‌ကြောင့်ဗိုက်အပ်ခြင်းသည် ဆရာ၀န်အားဖြင့်ပြုစု စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ထိုးဖို့မမေ့ရန်အတွက်လဲကူညီ‌စေစေမ့်မည်။